Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan durfamu, ijaarsa daandii Yaayyoo Eelemoofi riqicha Laga Gabbaa daawwate.
Jiraattota Aanaa Dooranniifi qaamoleen Mootummaa aanichaa akka ibsanitti ijaarsi daandii Yaayyoo Eelemoo Km 21 dheeratu kun bara 2003 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan kan eegalame yoo ta’u, gorsaan pirojektichaa immoo dhaabbata ‘Prominent’ jedhamu akka ta’e himu. Haa ta’u malee, piroojeektichi harkifataafi rakkoo qulqullina qaba jedhan.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan durfamus, aanichatti argamuun ijaarsa daandiifi riqicha Laga Gabbaa daawwate.
Komiin hawaasaa kun akka hiikamuuf qaamolee adda addaa gaafatanis, hanga ammaatti furmaata kan hin arganne ta’uu, miseensi Caffee Oromiyaafi bakka buutuun hawaasa Aanaa Dooranniifi Yaayyoo Aadde Lalisee Amanaa himaniiru.
Korporeeshinii ijaarsa Oromiyaatti Mahaandisiin ijaarsa Riqicha Laga Gabbaa Obbo Taaddasaa Guddataa gamasaaniitiin, waa’ee baajata ijaarsa daandichaafi riqichaa, akkasumas diizaayinii keessaa kan hin beekneefi inumaayyuu gorsaa waliin qindoominaan hojjetaa akka hin jirree fi meeshaalee ijaarsa riqichichaa irrattis qorannoon godhamaa kan hin jirre ta’uu dubbatu.
Sababni harkifannaafi rakkoon qulqullinaa pirojektichaa jedhu Obbo Diriirsaan, hawaasaafi qaamolee mootummaa Aanaafi godinaa waan hin hirmaachifneefi jedhu.
Itti Aantuun Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Injinar Nabilaa Oliis, ijaarsi riqicha Laga Gabbaa rakkoo qulqullinaa waan qabuuf, ammas xumuuramuu isaan dura sadarkaa amma irra jiru irratti qorannoon gahaan gaggeeffamuu qaba jedhan.
Walumaagalatti, qulqullina pirojektichaan walqabatee koreen ogeessotaan deeggarame addatti hundaa’ee irra deebiin qoratamuu akka qabu Gareen Koreewwan Dhaabbii daawwannicha irratti argame kun kallattii kaa’eera.
Toorbee kana 5980
Ji'a kana 84232
2008 irraa eggalee 5571508